DHAGEYSO: M/weynaha Puntland Deni: ”Hay’adaha caalamiga ah waxay u dhisan yihiin inay baabi’iyaan Dhallinyarada Afrika”! | HalQaran.com
DHAGEYSO: M/weynaha Puntland Deni: ”Hay’adaha caalamiga ah waxay u dhisan yihiin inay baabi’iyaan Dhallinyarada Afrika”!
Garoowe (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Mudane Saciid Cabdullaahi Deni ayaa shaaca ka qaaday ujeedooyinka iyo danta ay hay’adaha caalamiga ah (Ajnabiga ah) ka leeyihiin dhallinyarada qaaradda Afrika.
Mr. Deni, ayaa sheegay, in ay jiraan hay’ado caalami ah oo dalalkooda u qaabilsan in aysan shaqeysan ama waxba qabsan dhallinyarada ku nool qaaradda Afrika ama ka soo jeeda.
Madaxweynaha Puntland, ayaa arintan u sababeeyay, in looga dan-leeyahay in aysan dhallinyarada qaaradda Afrika, islamar ahaantaane la siiyo kaliye, dhaqaale yar si badeecadda dalalka ay shirkadahaasi ka soo jeedaan loogu suuq geeyo dalalka ku yaalla Afrika.
Hoos ka dhageyso hadalka xaqiiqda ah ee Madaxweyne Deni
M/weynaha Puntland Deni